एनआरएन अमेरिकाको चुनाव बारे संस्थापक पन्त | www.sidhakurausa.com
एनआरएन अमेरिकाको माउ संस्था नेपलिज अमेरिकन काउन्सिल(न्याक) को स्थापना सन् १९९१ मा हुँदा आजको एनआरएन एनसीसी अफ युएसए यो रुपमा आई पुग्छ भन्ने कसैले अनुमानसम्म गरेका थिएनन तर संस्थापक प्रल्हाद पन्तलाई यो बारेमा अनुमान रहेछ । सिधाकुरासंग अहिले बिहान कुराकानी गर्दै संस्थापक पन्तले भन्नु भयो -समाज परिबर्तनशिल छ र यो क्रम जसरी अगाडी बढ्छ त्यसैगरी सबैले यसलाई आत्मसात गर्दै हिड्नेहुनाले भोलीका दिनमा व्यक्तिगत आधारमा सबै कुराको निधो हुने हो । त्यहि आज एनआरएन अमेरिकामा भएको छ । वहाले जोड दिंदै भन्नु भयो हिजो र आजको आबस्यक्तालाई दाँजेर हेर्न मिल्दैन । हिजो जे थियो ठिक ठिक थियो, आज परिबर्तन भएको छ त्यो पनि राम्रो भएको छ र समाजको बिकासक्रम अनुसार चल्दै गएको छ । एनआरएन एनसीसी अफ युएसएको निर्बाचनको पूर्ब सन्ध्यामा संस्थापक पन्तसंग भएको छोटो कुराकानीको सार संक्षेप:
सिधाकुरा: एनआरएन एनसीसी युएसएको आसन्न निर्बाचनमा तपाइको चासो?
पन्त: पहिलो पटक व्यक्तिगत मतदान र उम्मेदवारीको आधारमा चुनाव हुँदैछ, यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ ।
सिधाकुरा: त्यसको मतलब भोट खसाल्नु हुन्छ त?
पन्त: निश्चित रुपमा म, मेरी श्रीमती बिन्दु र परिबारका अन्य सदस्य तथा वरिपरिका सदस्य रहेका नेपालीहरुलाई भोटिंग गर्न भन्छु । यो राम्रो शुरुवात हो ।
सिधाकुरा: पछि पछि त उम्मेद्वारी दिने अबस्था पनि आउँछ की?
पन्त: मैले नेपाली संघ संस्थाको आधिकारिक पदमा नबस्ने निधो सन् १९९३ मै गरेको हुँ, जब म एसोसिएसन अफ नेपलिज इन मिड वेस्ट अमेरिका(एन्मा) को अध्यक्ष थिएँ । त्यसपछि आधिकारिक पदहरुमा म बसेको छैन भने अब त झन यस्ता आधिकारिक पदमा उठ्ने काम म बाट हुँदैन ।
सिधाकुरा: न्याक सन् १९९१ स्थापना पछि एनआरएन अमेरिकाको कुनै पदमा आसिन हुनु भएन?
पन्त: भइन तर सन २०१० मा एनआरएन अमेरिकाको बिधानको सातौँ संसोधनका लागि गठित कमिटीमा रहेर बिधानलाई परिमार्जन गर्न सघाएको हुँ ।
सिधाकुरा: अहिले अमेरिकाको नेपाली समाजले तपाइँबाट त्यो भन्दा ठुलो आशा गरिरहेको छ । त्यो के हो भने एनआरएन अमेरिकाको संघिय र च्याप्टरहरुको बिधान तयार गर्ने काम आसन्न निर्बाचनको नतिजा प्रकाशित भएको भोलिपल्टदेखि शुरु गर्नु पर्नेछ । यो बेला तपाइँलाई नेपाली समाजले बाइलज कमिटिको कामको अफर गर्यो भने सघाउनु हुन्छ?
पन्त: यतिखेर म केहि भन्न सक्दिन तर समाज र एनआरएन अमेरिकाले त्यो भूमिका साच्चै खोज्यो र सबै साथीहरुको राम्रो संलग्नता हुने भयो भने म त्यो अफर त्यो बेला नै स्वीकार गर्छु र सघाउन तयार छु ।
सिधाकुरा: तपाइले एनआरएन अमेरिकाको चुनावी गतिविधिलाई कसरि निहालिरहनु भएको छ?
पन्त: मेरो चासो यो संस्था पूर्ण रुपमा नन पोलिटिकल हुनुपर्छ भन्ने हो तर चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा कतिपय उम्मेदवारहरु र उनीहरुका समर्थकहरुले खुलेरै राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा उठाएका छन, त्यो एनआरएनको मूल्य मान्यता बिपरित छ । म यो कुरा कदापि स्विकार्दिन यदि एनआरएनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने ।
सिधाकुरा: तर भइ त सक्यो?
पन्त: यदि भइसक्यो भने चुनावमा सारा मतदाताले त्यस्ता उम्मेदवारहरुलाई यो पटक नै परास्त गर्नु पर्छ । एनआरएन पूर्ण रुपमा नन पोलिटिकल हो ।
सिधा कुरा: राजनीतिक व्यक्ति जानेर वा नजानेर एनआरएनमा घुस्छ्न नै तिनीहरुलाई एनआरएन अमेरिकामा चलखेल गर्नबाट कसरि रोक्ने?
पन्त: राजनीति घुसाउन खोज्नेलाई रोक्ने उपाय एनआरएनको बाइलज स्ट्रंग बनाएर हो ।
सिधाकुरा: यहि त भनेको नन पोलिटिकल बनाउन बाइलज स्ट्रंग हुनु पर्यो, त्यसको लागि के तपाइँबाट एनआरएन अमेरिकामा भूमिका हुँदैन?
पन्त: निश्चित रुपमा हुन्छ । व्यक्तिगत मतदान र उम्मेद्वारीलाई बिशेष जोड दिने खालको स्ट्रंग बाइलज निर्माणमा सघाउछु समय र समाजले माग्यो भने ।
सिधाकुरा: भर्खरै नेपालबाट फर्किनु भएको छ, कस्तो लाग्यो त नेपालका गतिबिधिहरु?
पन्त: नेपालको राजनीतिले मलाई डिप्रेसन गराउला जस्तो भयो ।